ငါးချဉ်တစ်တုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငါးချဉ်တစ်တုံး
ငါးချဉ်ဆိုလို့… ခင်ဗျားတို ့လဲ မြင်ဖူးကြမယ် ထင်ပါရဲ ့
ပုစွန်ချဉ်တို့ငါးဖယ်ချဉ်တို ့လိုမျိုးပေါ့ဗျား
ကျုပ် ဒီစာကို ရေးမလို ့လုပ်တုန်း ၊ မိုးတွေရွာနေတယ်ဗျ
ကျုပ်လဲ ဘယ်ကနေဘယ်လို လမ်းပေါ်ရောက်နေမှန်း စဉ်းစားလို ့ကို မရပါဘူးဗျာ
ဒါနဲ ့မျက်နှာမူရာဘက် ခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေမိရင်း ၊ တစ်နေရာ ရောက်တော့
လူအုပ်ကြီးတစ်အုပ် ဆူဆူညံညံဖြစ်နေတာကို တွေ ့မိပါရဲ ့
ဒါနဲ ့၊ ဝင်စပ်စုကြည့်တော့…
အလယ်ခေါင်မှာ လူတစ်ယောက် ( ယောက်ျားတစ်ယောက် ) ၊ သွေးသံအလိမ်းလိမ်းနဲ ့စုတ်ပြတ်သပ်နေတယ် ။
သူ ့အနောက်က နံရံပေါ်မှာ သင်္ဘောဆေးနဲ့“ ဤ ” လို ့ရေးထားတာကို မြင်ရ/ဖတ်ရတယ် ။
အဲဒီ သွေးသံရဲရဲနဲ ့လူက အော်ပြောလိုက်တယ် ။
….. ခင်ဗျားတို ့တွေ ဘယ်လောက် ဆက်ပြီး ကျုပ်ကို နှိပ်စက် ၊ နှိပ်စက် ၊ ကျုပ်ကတော့ ဒါကို “ အီ ” လို ့ပဲ ဖတ်နိုင်မယ် … တောက် ထွီ …..
လူအုပ်ကြီးဟာ ပို ဒေါသထွက်လာတဲ့ပုံပေါက်လာပြီး ၊
ဒီလောက်တောင် ခေါင်းမာတဲ့ကောင် ၊ သတ်ကွာ ၊ ရိုက်ကွာ ၊ ချကွာ…. ဒီနေရာတင် အပြတ်ရှင်းလိုက်ကြရအောင်ဟေ့…
ကျုပ်လဲ မနေသာလို့၊ အဲ့ လူရှေ ့ကနေ ခဏဝင်ရပ်ပြီး …
““ နေကြပါဦး ဗျာ ၊ ခင်ဗျားတို ့က လူအများနဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဘာလို ့အဲ့လောက် ဒေါသတွေဖြစ်ပြီး သတ်ချင်နေကြရတာလဲဗျ ၊ အကျိုးအကြောင်းလေး ရှင်းကြပါဦး ””
ကျုပ်လဲ အဲ့လို ထွက်လိုက်ရော….
“““““ ဟာာာာာာာာာ ဆရာကြီးပါလား ”””””
“““ ဆရာကြီး မသေသေးဘူးပေါ့ ”””
““ ဆရာကြီး ကို အခုလို ပြန်တွေ ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ဗျာ ””
“ ကျုပ်တို ့က ဆရာကြီး ရဲ ့နောက်ထွက်မယ့် စာအုပ်တွေကို မျှော်နေတာဗျ ”
အဲ့ခါကြမှ ၊ ကျုပ်ကိုကျုပ် ဆရာကြီး ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်ဗျ ။ ( အဟဲ ၊ ကိုယ့်စာထဲမှာတော့ ကိုယ် ဆရာကြီး မဟုတ်လို ့ဘယ်သူ ့ကို ပြောရမှာလဲနော )
““““““ ဟေ့လူတွေ … ကျုပ် မေးနေတာကို ဖြေကြဦးလေဗျာ ””””””
လူအုပ်ကြီးလဲ ကျွတ်စီကျွတ်စီ (ရဲစီ နဲ ့အမျိုးတော်လား ကျုပ် မသိပါ) ၊ ခဏပြန်ငြိမ်သက်သွားပြီးနောက် ၊ သူရို ့ထဲက လူတစ်ယောက် မရဲတရဲ (ဒါလဲ ရဲစီနဲ ့အမျိုးလား မသိ)
နဲ ့ထွက်လာတယ် ။
…… ဒီလိုပါ ဆရာကြီး ၊ ဒီလူ ့အနောက်က နံရံမှာ ရေးထားတဲ့ “ဤ” ဆိုတာကို ဆရာကြီး တွေ ့ရမှာပါ ၊ အဲဒါကို ကျုပ်တို ့အားလုံးက ကျွဲလို ့ဖတ်ပါတယ် ။ အဲဒါကို ဒင်းက ၊ ကျုပ်တို ့နဲ ့အတိုက်အခံလုပ်ပြီး ““အီ”” လို ့အသံထွက်နေလို့၊ ဝိုင်းဆုံးမပဲ့ပြင်ပေးနေရတာပါ ….
.. ဟုတ်ပ ၊ ဟုတ်ပ ၊ ဒီလို ဆုံးမပေးမှာ လမ်းမှန်ရောက်မှာ ဆရာကြီးရဲ့..
. ဟုတ်တယ်ဗျို့.
ကျုပ် ၊ ဟို ၊ “အီ” လို ့အသံထွက်တဲ့လူဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ၊ သူ ့မျက်လုံးတွေဟာ တောက်ပနေတယ် ။ လုံးဝ အညံ့ခံ လက်လျှော့မယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး ။ ဒါနဲ ့ကျုပ်လဲ သူ ့လက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် ။ သူကလဲ ဝမ်းသာစွာနဲ ့ပြန်လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်တယ် ။
“““ ရဲဘော်ရေ … ကျုပ်ကတော့ သူရို ့ပြောတဲ့ ဆရာကြီး ဆိုတာပေါ့ဗျာ ၊ ကျုပ် ပြောချင်တာက ၊ ရဲဘော် ရဲ ့စိတ်ဓါတ်ကို ကျုပ် သဘောကျမိတယ်ဗျာ ။ လေးစားတော့ မလေးစားဘူး ။ လေးစားတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဓိပ္ပါယ်အရမ်းကျယ်ပြန် ့တဲ့ အတွက် ၊ လွယ်လွယ်ကူကူ တွေ ့ရာလူကို ကျုပ် မပြောတတ်တာကို သဘောပေါက်မယ် ထင်ပါတယ် ။ ခင်ဗျားအနေနဲ ့ကျုပ်ကို လေးစားစရာ အကြောင်းမရှိသလို ၊ ကျုပ်အနေနဲ ့လဲ ခင်ဗျားကို လေးစားစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိတာမို့၊ ဟန်ဆောင်လိမ်ညာ လေကုန်ခံပြီး လေးစားပါတယ် လို ့မပြောတော့ဘူးနော ၊ ဒါပေသည့် ခင်ဗျား စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ သဘောကျတယ် ဆိုတာလေး ပြောခဲ့ဦးမယ် ။ ဒါပဲဗျာ ၊ ကျုပ် လစ်ပြီ ”””
သို ့ဖြင့် ၊ သူရို ့တွေ ပြောတဲ့ ဆရာကြီးဆိုတဲ့ ကျုပ်လဲ စောနက ကျုပ်လျှောက်လာခဲ့တဲ့ လမ်းအတိုင်း ပြန်လျှောက်ပြန်လာခဲ့တယ် ။
သူရို ့တွေ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြလဲ ၊ စိတ်လဲ မဝင်စားတော့ဘူး ၊
တစ်ကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးမို့၊ အဓိပ္ပါယ်ပိုရှိမယ့် အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်ဆိုတာတွေကိုပဲ စဉ်းစားရင်း ၊ လက်တွေ ့လုပ်ဖို ့အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်လို ့ကျုပ် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ဖို ့ကြံစည်နေမိတယ် ။ (ကြံစည် နဲ ့ရဲစည်လဲ အမျိုးမတော်ပါဘူး)
——- ဒီ အန် ့——-
အင်း ပထမရအောင်နေရာဦးပီး မနက်မှ ပြန်လာမန့်တော့မယ်။
တစ်ကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးမို့၊ အဓိပ္ပါယ်ပိုရှိမယ့် အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်ဆိုတာတွေကိုပဲ စဉ်း စားရင်း ၊ လက်တွေ ့လုပ်ဖို ့အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်လို ့ကျုပ် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ဖို ့ကြံစည်နေမိတယ် ။
လေးစားဒါနဲ့ ပတ်သက်ပီး ပေါရရင်
လူဒွေ လူဒွေဂ သေပီးမှ ပိုလေးစားဒတ်ဒါ ….
ဒီဇာတ်ထဲက အီ လို့ ဖတ်တဲ့လူ
အကယ်၍များ သေသွားခဲ့ရင် …
နောက် အနှစ် ( ) ကြာတီ ရှိသောအခါ …
သူလည်း ဆိုကရေးတီး လို ကဘာကျော်ဂျီး ဖစ်ချင် ဖစ်လာမှာ ….
ပေါလို့ ရဒါ မဟုတ်ဘူး …
အီ လဲမဟုတ်၊ ကျွဲလဲ မဟုတ်။
ဤ = ကျွီ
ဒီ ရက် သူပုန်ယွဲ တစ်ယောက် အတော် စန်းထ နေပါပေါ့လား။
ပျောက်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ မောင်ပေတစ်ယောက် ငါးချဉ်တစ်ထုပ်နဲ့ ရွာသူားတွေကို ဧည့်ခံဖို့ ပြန်ရောက်လာပြီပေ့ါ။
ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်တဲ့သူတွေ လက်ချက်နဲ့ သွေးသံအလိမ်းလိမ်း ခံရတာတော့ မတန်ဘူးထင်တယ်။
အဲလိုခံနေမယ့်အစား အဲဒီလူတွေနဲ့ ဝေးရာကို ရှောင်သွားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
လူ ညီညီ မညီညီ ဤကဤ ကျွဲကကျွဲ ပါပဲ ဆြာကြီးရယ်…
ဆြာပေလည်း ရွာထဲပျောက်နေတာ ကြာပေါ့…
ငါးချဉ်ကြော်လေး စားချင်မိသွားတယ်ဗျ ဆရာပေရေ။
အတွေး ကို ရေး ထားတာ ဂွတ်တယ်ဗျာ
အများညီ ဤကို ကျွဲ လို ့ဖတ်
မဖတ်ချင်သူ ဒို ့ရန်သူ
အော် လောက လောက
ဒ ဒွေး = ဒ
ရေးချ = ာ
လုံးကြီးတင် ဆံခတ် = ီ
ဝစ္စပေါက် = း
အသံထွက် ရင် ရတယ်နော်
အများ ညီဖို ့တော့ လိုတာပေါ့
မတွေ ့တာ ကြာပေါ့
အခုတလော လူတွေအားလုံးလဲ ကျွဲလို့ဖတ်ကုန်ကျပီထင်ပါ့အေ။ နေရာတိုင်းစိတ်ညစ်စရာတွေချည်းပဲ။
ဤလည်းမဟုတ် ကျွဲလည်းမဟုတ်.. နွား………ဟေ့………နွား… ဘွတ်အဲ….. တလုပ်ပြည်ပို့…